womi micro-finance(womi micro-finance) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
वोमी र ग्रामीण स्वयंसेवक लघुवित्त आपसमा गाभिने, सेयर कारोबार रोक्का
काठमाण्डौ । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र ग्रामीण स्वयंसेवक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडबीच आपसमा गाभिने भएका छन्। काभ्रेको बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको वोमी लघुवित्त र सर्लाहीको हरिवन केन्द्रीय कार्यालय रहेको ग्रामीण स्वयंसेवक लघुवित्त आपसमा गाभिने भएका हुन्। यसका लागि दुवै लघुवित्त संस्थाले गत शुक्रबार...
वोमीको स्थगित साधारणसभा असार १९ गते आह्वान, २५% बोनस सेयर पारित हुने
काठमाण्डौ । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले कोरोना प्रकोपका कारण स्थगन गरेको वार्षिक साधारणसभाको नयाँ मिति तोकेको छ । कम्पनी संचालक समितिको असार ३ गते बसेको १४९ औं बैठकले उच्च सतर्कता अपनाई सामाजिक दूरी समेत कायम गरेर कम्पनीको स्थगित आठौं वार्षिक साधाणसभा असार १९ गते शुक्रबार गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बिहान ११ः३०...
सेन्चुरी बैंक र वोमी लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति?
काठमाण्डौ । बोनस सेयरका लागि सेन्चुरी कमर्सियल बैंक र वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका सेयरमूल्य शुक्रबार समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले दुवै वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई २ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको सेन्चुरी...
सेन्चुरी बैंक र वोमी लघुवित्तको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाण्डौ । सेन्चुरी कमर्सियल बैंक र वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने भनी प्रस्ताव गरेको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज बिहीबार अन्तिम मौका रहेको छ। वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि दुवै वित्तीय संस्थाले भोलि शुक्रबार (फागुन ३० गते) देखि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसको मतलब...
वोमी माइक्रोफाइनान्सको लाभांश दरमा संसोधन, के आयो नयाँ प्रस्ताव ?
काठमाण्डौ । वोमी माइक्रोफाइनान्सले लगानीकर्तालाई दिने भनी घोषणा गरेको लाभांश दरमा संसोधन गरेको छ । वोमी लघुवित्तको पुस २० गते सम्पन्न संचालक समितिको बैठकले सेयरधनीहरुलाई २५ करोड २५ लाख ७६ हजार चुक्तापूँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर र ६ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल २६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । लाभांशको यो...
वोमी लघुवित्तको ४१ हजार बढी संस्थापक सेयर बिक्रीमा, कसले किन्न पाउँछ ?
काठमाण्डौ । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ४१ हजार ८४८ कित्ता संस्थापक सेयर आज मंगलबारदेखि संस्थापक समूहभित्रकै सदस्यहरुका लागि बिक्री खुला गरेको छ। संस्थाले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै संस्थापक सेयरधनीहरुबाट आफ्नो नाममा रहेको उक्त परिमाणको सेयर बिक्रीका लागि निवेदन प्राप्त भएकोले संस्थापक समूहभित्रकै सदस्यहरुका...
काठमाण्डौ । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा अधिकांश वित्तीय सूचकमा आकर्षक प्रगति गरेको छ । दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले खुद नाफा ५८.५१ प्रतिशतले बढाउँदै ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो...
वोमी लघुवित्तद्वारा लगानीकर्ताका लागि लाभांशमा डबल अफर
काठमाण्डौ । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले आफ्ना लगानीकर्ताका लागि बोनस र नगद लाभांशको डबल अफर प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको आइतबार दिउँसो बसेको संचालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि वितरणयोग्य मुनाफाबाट लगानीकर्तालाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस तथा नगद लाभांशमा लाग्ने करसहित ६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको...
मर्जरपछि वोमी र नागरिक लघुवित्तको एकीकृत कारोबार आजबाट सुरु
काठमाण्डौ । मर्जर प्रक्रिया टुंगाएका वोमी लघुवित्त र नागरिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको एकीकृत वित्तीय कारोबार आज सोमबारदेखि सुरु भएको छ । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको अनुमति पाएका यी दुवै वित्तीय संस्थाले गत भदौ १२ गते विशेष साधारणसभाको आयोजना गर्दै...
राष्ट्रबैंकद्वारा वोमी र नागरिक लघुवित्तबीचको मर्जरलाई अन्तिम स्वीकृति प्रदान
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था र नागरिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच आपसमा मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको छ । राष्ट्रबैंकले मंसिर ६ गते (शुक्रबार) दुवै वित्तीय संस्थाबीच आपसमा मर्जरका लागि स्वीकृति दिएको हो । यी दुवै संस्थाबीच गत वर्ष फागुन २४ गते मर्जर सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता...
काठमाण्डौ । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लिलामीमा राखेको संस्थापक समूहको हकप्रद सेयरमा खरिद आवेदन दिने आज बिहीबार अन्तिम दिन रहेको छ । संस्थाले गत कात्तिक २१ गतेदेखि अघिल्लोपटकको लिलामीमा पनि बिक्री नभएको संस्थापक समूहको ६२ हजाभन्दा बढी कित्ता हकप्रद सेयर पुनः लिलामीमा राखेको हो । संस्थाले गत साउन ९ गतेदेखि भदौ ११...
कर्फ्यु लाग्यो बालबालिकालाई ‘अनलाइन गेम’ मा, राति १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म खेल्न नपाइने
काठमाण्डौ । चीनले बालबालिकाहरूलाई अनलाइन 'गेमको' लतबाट जोगाउन खेल खेल्ने समयमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। अठार वर्षभन्दा मुनिकाहरूले रातको १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म अनलाइन खेल खेल्न नपाउने व्यवस्था गरिँदैछ। त्यसबाहेक सामान्य दिनमा डेढ घण्टा र सप्ताहान्त तथा बिदाका बेला तीन घण्टा मात्र अनलाइन खेलको मजा लिन पाउने व्यवस्था...
वोमी लघुवित्तले संस्थापक समूहको ६२ हजार कित्ता सेयर फेरि लिलाममार्फत बेच्ने
काठमाण्डौ । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लिलामीमा पनि बिक्री नभएको संस्थापक समूहको ६२ हजारभन्दा बढी कित्ता हकप्रद सेयर कात्तिक २१ गतेदेखि पुनः बोलकबलमार्फत बिक्री खुलाउने भएको छ । संस्थाले गत साउन ९ गतेदेखि भदौ ११ गतेसम्म रु १०० अंकित दरका १० लाख १० हजार ८८० कित्ता हकप्रद सेयर निकाष्सन गरेको थियो । जुन कम्पनीको चु�...
काठमाण्डौ । अस्ट्रेलियाको क्विङ्सल्यान्ड युनिभर्सिटीस्थित एउटा प्रयोगशालामा केही असामान्य नमुनाहरु संकलन गरेका छन् । यी नमुना अस्ट्रेलियाको २० प्रतिशतभन्दा बढी आवादीको मानव मलमूत्र हो । अस्ट्रेलियाभरबाट मानव मलमूत्र जलशोधन संयन्त्रबाट नमुना संकलन गरी तिनलाई चिसो बनाएर युनिभर्सिटीको शोकर्तालाई पठाइएको छ। यी नमुनालाई ...
गोर्खाज फाइनान्सको ब्याजदर ११% सम्म पुग्यो, सेयर कर्जा लिँदा १४.१६% सम्म पर्ने